ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများအတွက်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း Linux မှ
Un ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများအတွက်ကျင့်ဝတ် တစ် ဦး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိကျသောလမ်းရှိနိုင်ပါသည် နောက်ဆုံးပေါ်လူမှုရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများနှင့် / သို့မဟုတ်တန်ဖိုးများကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း «Software Libre y Código Abierto».
ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အုပ်စုများသို့မဟုတ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အချို့ကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့်ပorိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းသဘောတူညီချက်အဘယ်အရာကိုလက်ရှိလက်ခံခဲ့သည်တစ် ဦး ၏ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပါတယ် ကျင့် Code ကိုအခြားအမှုများအဘို့အဘို့, မတူကွဲပြားမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိခြင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် အမျိုးသမီးများ၊ အရောင်ရင့်သူများနှင့်အခြားဘေးဖယ်လူ ဦး ရေတို့၏ကိုယ်စားပြုမှုနည်းခြင်းသို့မဟုတ်နိမ့်ကျခြင်းတို့ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။
မည်သည့်အဖွဲ့နှင့်အသင်းအဖွဲ့တွင်မဆို၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးသောကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ရွာများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများသည် «Software Libre y Código Abierto» အမှတ်တမဲ့ဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်ဘဲဖြစ်စေဖြစ်လာနိုင်သည် တခါတရံရန်လိုသောနေရာများ အမျိုးမျိုးသောလူသို့မဟုတ်လူအုပ်စုများသည် အလျှော့မပေးသောရပ်တည်ချက်များသို့မဟုတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အမြင်များ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် / သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များကပြုလုပ်သည်။
အခြားကိစ္စများတွင်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်သည့်အခြေအနေများပေါ်ပေါက်နိုင်သည် ဘေးဖယ်လူစုလူဝေးအုပ်စုများ၏ပါဝင်မှုသို့မဟုတ်မသင့်လျော်လွှဲပြောင်းလိင်သို့မဟုတ်လူမျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယူဆချက်များပြုလုပ်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောဘာသာစကားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပုံစံပုံစံများကိုအားဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထိခိုက်လွယ်သောသို့မဟုတ်ဘေးဖယ်ခံထားရသောသူများ၏လုံခြုံမှုနှင့်သုခချမ်းသာကိုလေးစားမှုမရှိခြင်းကိုပြသခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေးစားဖွယ်နှင့်ချစ်မြတ်နိုးမှုအတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလူမှုရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည် «Comunidades de Software Libre y Código Abierto» အတိအကျပါ ပိုမို လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ သူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့လူသားတွေအဖြစ်တန်ဖိုးထားဖို့။
လျစ်လျူရှုခြင်းမရှိဘဲ, အားလုံးတန်းတူညီမျှမှုရှိရန်ကြင်နာမှု၊။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်စိတ်ကိုထားရမည် «Comunidades de Software Libre y Código Abierto» တစ် ဦး ၏မွေးစား ကျင့် Code ကိုအခွန်ထမ်းပြည်သူလူထုအားလုံး၏ဘုံစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတန်ဖိုးများကိုဖော်ပြရန်နှင့်ပြဌာန်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုခွင့်ပြုပေးပြီး၎င်းတို့အားပိုမိုကြိုဆိုခြင်း၊
ကျနော်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤအ၏မွေးစား ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ ဖက်ရှင်ဖြစ်သည်၊ လူသိအများဆုံးလူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့၏နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး ၃ ခုနှင့် ဆက်စပ်၍ အောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြနိုင်သည် «GAFAM» ကြောင်း၏စီမံကိန်းများ၏လက်ရှိအထောက်အကူပြု «Código Abierto»:
အပြုအမူ Microsoft Open Source Code: ၎င်းတို့ကျင့် ၀ တ်စည်းမျဉ်းတွင်၎င်းတို့စီမံခန့်ခွဲထားသော open source အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများကိုအစီရင်ခံရန်အဆင့်များကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းတွင်သူတို့သည်အားလုံးအတွက်ကြိုဆိုပွဲနှင့်စိတ်အားတက်ကြွသောအသိုင်းအဝိုင်းကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုကြသည်။ ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်သောသူများကိုရပ်ကွက်မှနှင်ထုတ်နိုင်သည်ဟုသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသည်။
Facebook တွင်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အပြုအမူ: သူတို့ကျင့် ၀ တ်စည်းကမ်းများတွင်သူတို့စီမံခန့်ခွဲထားသောအရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းပွင့်လင်း။ ကြိုဆိုသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း၏အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ပြသည်၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်အသက်၊ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား၊ မသန်စွမ်းမှု၊ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ကျားမရေးရာလက္ခဏာနှင့်ဖော်ပြချက်၊ အတွေ့အကြုံ၊ ပညာရေး၊ လူမှုစီးပွားအခြေအနေ၊ နိုင်ငံသား၊
Google Open Source ကျင့်ဝတ်: သူတို့ကျင့် ၀ တ်စည်းမျဉ်းတွင်တန်ဖိုးနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးနှင့်ဖော်ပြသည်။
ငါတို့သည်လည်းအခြားကုဒ်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ ပိုမိုလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းသောအသိုင်းအဝိုင်းများဖြစ်သော
WebRTC Toolkit ကိုဖွင့်ပါ
အများကြီးပိုသိနှင့်စူးစမ်းဖို့ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများအတွက်အပြုအမူကုဒ်များ အောက်ပါ link ကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ပံ့ပိုးသူပovenိညာဉ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကျင့်ထုံးများမွေးစားသူများ.
မင်းမျှော်လင့်ပါတယ် "သေးငယ်ပေမယ့်အသုံးဝင်သောပို့စ်" ၏ဤစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းစဉ်အပေါ် «Código de Conducta para proyectos de Código Abierto»ဤစီမံကိန်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းမကြာသေးမီကအလွန်ခေတ်စားလာသော၊ တစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးရှိပြီးအသုံးဝင်သည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများအတွက်ကျင့်ဝတ်